Global Voices teny Malagasy » Belarosia: Fihetseham-po taorian’ny fipoahana tao anaty metro · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 14 Avrily 2011 7:11 GMT 1	 · Mpanoratra Ashley Cleek Nandika (fr) i Suzanne Lehn, Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Belarosia, Vaovao Mafana, Voina, Vonjy Voina, Akon'ny RuNet
Nahafaty olona 12 hatramin'izao ny baomba nipoaka tao anatin'ny fiantsonana ktyabrskaya, métro any Minsk ny 11 aprily 2011 teo, ary an-jatony ireo naratra.
Vetivety kely taorian'ny loza niseho, nandray ny fampaherezana nalefa tamin'ny tweet ireo fianakaviana sy naman'ireo niharam-boina tamin'ny alalan'ny tenifototra #minsk  sy #minskblast  (fipoahan'ny minsk).
Nitanisa  vavolombelona maromaro tao an-toerana ny BBC izay nanambara fa nanomboka teo amin'ny “5ora58 hariva” ny alatsinainy 11 aprily, nisy “feo mafy be” ary ny toeram-piantsonan'ny metro ao Oktyabrskaya afovoan'i Minsk izay ahitana lalana roa mifanipika ao an-tanàna no voarakotry ny setroka.
Fivoahana ao amin'ny métro ao Minsk taorian'ny fipoahana. Sary tao amin'ny TwitPic de @mixal
Raha mbola tsy fantatra tany am-boalohany izay toerana mety misy ny baomba na tao anatin'ny fiaran-dalambin'ny metro na teo ivelany amin'ny sisin'ny fiantsonana, nitatitra ny Sampan'asa Rosiana BBC  [amin'ny teny rosia] fa fiaran-dalamby roa no nijanona teo amin'ny fiantsonana tamin'ny fotoana nitrangan'ny loza , ary nampiseho ny iray tamin'ireo horonan-tsary voalohany taorian'ny loza . Nolazain'ny governemanta belarosiana fa toy ny “asa fampihorohoroana” ny fanapoahana baomba niseho.
Nitatitra ny mpanao gazety ao Minsk amin'ny Gazeta.ru  [amin'ny teny rosia] fa tsy navelan'ireo mpanao politika nanatona ny faritra mifanakaiky amin'ny metro ireo mpanao gazety :
Teo an-toerana, nalain'ireo polisy misahana ny toe-draharaha vonjimaika ny fakan-tsary sy finday an'ireo rehetra izay mbola mikiry maka sary ny zava-nitranga. “Miseho ho sarotiny ny polisy”.
Maro ireo horonantsary mbola niseho tamin'ny aterineto. Ity horonantsary natao tamin'ny YouTube abryko  ity ny 11 aprily dia mampiseho ny tohin'ny fampihorohoroana eo noho eo (FAMPITANDREMANA : horonan-tsary mampatahotra) :
Horonantsary nalefan'ny iar107  tamin'ny aterineto ny andro nisehoan'ny loza, mampiseho ny fomba namonjena ireo olona taorian'ny fipoahana:
Nitatitra  i Ria Novosti [amin'ny teny rosia] fa ny marainan'ny 12 aprily, olona 157 no naiditra hopitaly ka 26 tamin'izany no naratra mafy.
Nanambara ny Filoha Belarosia Alexander Loukachenko fa ahiany  ho misy fifandraisana tamin'ny loza niseho nandritra ny fampisehoana an-kalamanjana tamin'ny taona 2008 ny fampihorohorona nitranga.
Bilaogera sasantsasany no niray hevitra tamin'izany. Yuri Shevtso nanoratra  :
Mazava amiko, mazava amintsika rehetra, fa tafihin'ny vondrona mpampihorohoro tsy mitsitsy isika. Tsy fampihorohoroana ato anatiny izany. Fa fampihorohorona avy any ivelany.
Raha mbola nihevitra ireo bilaogera sasany fa asa fampihorohorona ireny, dia nanomboka nanazava  fa:
Raha fampihorohorona marina, raha tsy loza noho ny tsy fitandremana amin'ny fitaterana zavatra mipoaka (baomba), araka izany, raha ny hevitro manokana, dia ireo islamista. Ireo ” namana Kaokaziana ” islamista. Tsy mahita lalana hafa aho.
Niady hevitra ny hafa  fa mety noketrehan'ny mpanohana an'i Loukachenko ny loza mba hamotehana ireo antoko mpanohitra.
Nilaza ny heviny ilay bilaogera Shusharin  :
Ny KGB [Sampam-pitsikilovana Belarosia  – GV] no nanapoaka baomba an'i Belarosia.
Tsy misy safidy hafa intsony. Mbola tsy nisy mihitsy ny fihetsika mahery tamin'ireo antoko mpanohitra Belarosiana. Olona iray ihany no mahazo tombony amin'izany: dia i Loukachenko. Mba hampitahorana ny vahoaka Belarosiana – fa tsy ny mpanohitra.
Raha mbola nameno ny Twitter ireo hafatra sy tweet mahakasika ny fampiononana, lahatsoratra  iray no nilaza fa tamin'ny 12 aprily, olona maro no nivorivory mba handrehitra labozia ho an'ireo namoy ny ainy :
Ho antsika rehetra, aza mba variana! Rahampitso, amin'ny 7ora hariva eo ampitan'ny sehatra Y. Kupala. Voninkazo sy labozia ho fahatsiarovana. Ilazao ny hafa. Misaotra.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/04/14/16356/
 iray tamin'ireo horonan-tsary voalohany taorian'ny loza: http://www.bbc.co.uk/russian/international/2011/04/110411_minsk_blast_aftermath.shtml
 nanomboka nanazava: http://nikitich-info.livejournal.com/11793.html
 Niady hevitra ny hafa: http://maratguelman.livejournal.com/2022157.html?thread=38421261#t38421261
 Sampam-pitsikilovana Belarosia: http://en.wikipedia.org/wiki/State_Security_Agency_of_the_Republic_of_Belarus